Otu esi etinye ma jiri Telnet na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
September 30, 2021 August 4, 2021 by Jọshụa James
Wụnye Telnet Server Ubuntu 20.04
Jikọọ na ihe nkesa Telnet gị na Ubuntu 20.04
Tọọ Iwu UFW
Wepu Telnet na Ubuntu 20.04
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye Telnet na Ubuntu 20.04 na 21.04.
Ihe Ubuntu 20.04 ebe nchekwa nwere Telnet dị na ndabara.
Nke mbụ, iji jikọọ na sistemụ dịpụrụ adịpụ nke na-agba Telnet, ị ga-achọ ịtọlite ​​​​iwu ikike. Site na ndabara, Telnet na-arụ ọrụ ọdụ ụgbọ mmiri 23.
Ka ịtọlite ​​​​iwu ikike ịbanye UFW enwere ike ime ya n'ụzọ dị iche iche. A na-atụ aro nke ukwuu inye ihe IP nke ihe nkesa na-ejikọta naanị ma ọ bụrụ na ọ ka njọ netwọk. Ahapụla ọdụ ụgbọ mmiri 23 na-emeghe ihe niile, na nke a ga-eduga na brute ike mgbalị.
Iwepu Telnet apụ gị Ubuntu 20.04 Sistemụ arụmọrụ, naanị ihe ị ga - eme bụ iji iwu a:
Nke a ga-ewepụ kpamkpam Telnet na akara. Iji tinyegharịa, na-eso nkuzi site na mmalite.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye ya, guzobe iwu firewall, na jikọọ na sava dịpụrụ adịpụ site na iji Telnet. N'ozuzu, n'ụwa nke taa, ụdị nkwurịta okwu kachasị dị nchebe nke ọdịdị a bụ iji SSH kama Telnet. Agbanyeghị, gburugburu mmepe nke na-arụ na netwọkụ mpaghara dịpụrụ adịpụ Telnet nwere ike ịba uru karị. N'agbanyeghị nke ahụ, ị ​​gaghị agba ọsọ Telnet na netwọk ọha ụbọchị ndị a, ọ ga-emeghekwa ihe nkesa gị ruo a nnukwu ihe ize ndụ n'ime otú ahụ.
Categories Ubuntu Tags Telnet, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo